Isilinda abavelisi, abaxhasi - China Isilinda mveliso
I-bong ye-35cm yokuphinda isetyenziswe kwakhona
I-35cm yeglasi yokurisayikilisha yeglasi
I-30cm yokuphinda usebenzise i-bong nge-thr ...
intengiso eshushu enkulu yokuphinda isebenze i-bong
i-bong enkulu yokurisayikilisha
UMBINI OWENZIWAYO WOMBINI PERC WOKUGQIBELA Umbhobho WAMANZI
• Ukuphakama 40cm
• Kuza isitya se-14mm kunye nokusasazeka kwesiseko
• Yakhiwe ngeglasi ye-borosilicate ekumgangatho ophezulu
I-Double Percolator Bong ineempawu ezimbini zomthi osikiweyo we-laser for hit hit smooth with zero zero. Le yenye yezona zinto zibalaseleyo zeeperc bongs kwintengiso. Xa ufuna eyona nto ipholileyo, yokutshaya egudileyo, akukho nto inokubetha ukusasazeka okuphindwe kabini. Le bong bong tower ngo-12 ukukuzisela ii-percolator ezi-2 ezahlukeneyo zentloko yeshawa. Xa uyisebenzisa, iya kuvelisa amakhulu amabhulu amancinci. Umsi obangelwayo ucocekile kwaye awukho rhabaxa, ukuvumela ukuba uthathe irips ezinkulu.
I-Tube echanekileyo yeHookah yokuTshaya iPayipi yamanzi yaManzi
Ityhubhu egqibeleleyo echanekileyo, sinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhombisa, ngokuqinisekileyo iya kuba yiklasikhi yakho.
Ngawo la maxesha ufuna ukonwabela ezinye ii-rips ezipholileyo, yeka iityhubhu zomkhenkce ezimbalwa entanyeni. Ukubanjiswa komkhenkce nge-3-pinch kuya kuzisa imilebe yomkhenkce kwimilebe yakho elindelekileyo kwisithethi esirim kamnandi.
I-Ice Bong ethe tye kunye neMatrix Perc
• Ukuphakama 32cm
Umsi uyaqhekeka ube ngamasuntswana amancinci njengoko utsalwa kwizilayidi ezifakwe emanzini. Umsi uyaqhubeka uphezulu kwaye ugqobhoze i-matrix percolator ngaphambi kokuba uphume ngomlomo. Le nkqubo ibonelela ukuhluza okubalulekileyo kwaye yenza ukuba umsi upholile, ngenxa yokubetha kugcwele incasa kwaye akukho rhabaxa emqaleni.
Inkampani iindaba zakutshanje
Izinto zokuqala kuqala: Iindidi zeBong
Izinto ezi-3 zokuQaphela xa ukhetha iGlass Bong
Ukuba uyayifuna, nceda unxibelelane nathi ngexesha
Ilali yaseDasun, iSixeko saseHejian, eHebei, China